ဒယ်လ်တာ လေကြောင်းလိုင်း - ဝီကီပီးဒီးယား
၂၁:၀၄၊ ၁၉ စက်တင်ဘာ ၂၀၂၀ နေ့က InternetArchiveBot (ဆွေးနွေး | ပံ့ပိုး) (ရင်းမြစ် 1 ခုကို ကယ်ဆယ်ပြီး0ခုကို လင့်ခ်သေအဖြစ် စာတွဲပြီးပါပြီ) #IABot (v2.0.7) တည်းဖြတ်သည့်မူ
မေ ၃၀၊ ၁၉၂၄; ၉၇ နှစ် အကြာက (၁၉၂၄-၀၅-30)
(Huff Daland Dusters အမည်ဖြင့်)
ဇွန် ၁၇၊ ၁၉၂၉ (၁၉၂၉-၀၆-၁၇)
အမ်စတာဒမ် (operated by Air France-KLM)
ပါရီ (operated by Air France-KLM)
၈၅၆ (mainline only)
"Buildingabetter airline, not justabigger one"
Berkshire Hathaway Investment Management (8.21%)
အတ္တလန္တာမြို့၊ ဂျော်ဂျီယာပြည်နယ်၊ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု
US$ ၃၉.၆၃၉ ဘီလီယံ (၂၀၁၆)
US$ ၆.၉၅၂ ဘီလီယံ (၂၀၁၆)
US$ ၄.၃၇၃ ဘီလီယံ (၂၀၁၆)
US$ ၅၁.၂၅၆ ဘီလီယံ (၂၀၁၆)
US$ ၁၂.၂၆၃ ဘီလီယံ (၂၀၁၆)
ဒယ်လ်တာ လေကြောင်းလိုင်း (အင်္ဂလိပ်: Delta Air Lines) သည် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတွင် အခြေစိုက်သော လေကြောင်းလိုင်းကြီးတစ်ခုဖြစ်ပြီး ဌာနချုပ်မှာ ဂျော်ဂျီယာပြည်နယ် ကောလိပ်ပတ်ခ်တွင် တည်ရှိသည်။ ထိုလေကြောင်းလိုင်းသည် ပြည်တွင်းနှင့် ပြည်ပ လေကြောင်း ခရီးစဉ်များကို ပြေးဆွဲလျှက် ရှိပြီး အန္တာတိကတိုက်မှ လွဲ၍ အခြားတိုက်ကြီးများသို့ ပြေးဆွဲနေသော နိုင်ငံတကာ ကွန်ယက်များ ရှိသည်။ ဒယ်လ်တာ နှင့် ၎င်း၏ ကုမ္ပဏီခွဲများမှ တစ်နေ့လျှင် ခရီးစဉ်ပေါင်း ၄၀၀၀ ကျော် ပြေးဆွဲလျှက် ရှိသည်။ လေကြောင်းလိုင်း၏ ဌာနချုပ် ဖြစ်သော ဟတ်ဒ်ဖီး-ဂျက်ဆန် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လေဆိပ်မှာ ကမ္ဘာပေါ်တွင် အကြီးဆုံး ဖြစ်ပြီး ၁၉၉၉ ခုမှစ၍ ခရီးသည် အရေအတွက် နှင့် အတက်အဆင်း အများဆုံး စာရင်းဇယားဖြင့် ကြည့်လျှင် ကမ္ဘာပေါ်တွင် အလုပ်အများဆုံး လေဆိပ်ဖြစ်ပြီး တစ်နှစ်လျှင် ခရီးသည်ပေါင်း ၈၈ သန်းကျော် ဝင်ထွက် သွားလာလျှက် ရှိသည်။ ထိုသို့ ဖြစ်ရခြင်းမှာ ဒယ်လ်တာ လေကြောင်းလိုင်း ရှိနေသည့် အတွက်ကြောင့်ပင် ဖြစ်သည်။ ဒယ်လ်တာသည် စကိုင်းတင်းမ် အလိုင်းယင့်ကို စတင်တည်ထောင်သူများတွင် တစ်ဦး အပါအဝင် ဖြစ်သည်။
၂၀၀၈ ခုနှစ် အောက်တိုဘာ ၂၉ တွင် ဒယ်လ်တာသည် နော့သ်ဝက်စ် လေကြောင်းလိုင်းနှင့် ပေါင်းစပ်ခဲ့ပြီး ကမ္ဘာပေါ်တွင် အကြီးဆုံး လေကြောင်းလိုင်း ဖြစ်လာခဲ့သည်။ ဒယ်လ်တာသည် ပြိုင်ဘက်ဖြစ်သော ယူနိုက်တက် လေကြောင်းလိုင်း နှင့် ကွန်တီနင်တယ် လေကြောင်းလိုင်းတို့ ပေါင်းစပ်ထားသည့် လေကြောင်းလိုင်းမှ လေကြောင်းလိုင်းတစ်ခုတည်း အဖြစ် ပျံသန်းခွင့် ရသည့် အချိန်အထိ အကြီးဆုံး လေကြောင်းလိုင်း အဖြစ် ဆက်လက် ရှိနေမည် ဖြစ်သည်။
↑ History။ news.delta.com။ Delta Air Lines Inc. (October 2010)။ January 11, 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ “1924 The Huff Daland Dusters crop-dusting operation, which formed the roots for Delta, founded in Macon, Ga. Passenger Airline founded 1929, Monroe, La.”
↑ Norwood၊ Tom; Wegg၊ John (2002)။ North American Airlines Handbook (3rd ed.)။ Sandpoint, Idaho: Airways International။ p. 40။ ISBN 0-9653993-8-9။
↑ Airline Certificate Information – Detail View။ av-info.faa.gov။ Federal Aviation Administration (September 30, 1988)။ “Certificate Number DALA026A”
↑ Delta Air Lines Hub Station Amsterdam။ delta.com (March 4, 2016)။ April 13, 2016 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၅.၀ ၅.၁ Global Network။ 10 February 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Delta Air Lines Hub Station Paris။ delta.com (March 4, 2016)။ April 13, 2016 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Delta Air Lines Hub Station Detroit။ delta.com (March 4, 2016)။ April 13, 2016 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Delta Air Lines Hub Station Atlanta။ delta.com (March 4, 2016)။ April 13, 2016 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၉.၀ ၉.၁ Delta Air Lines Hub Station New York City။ delta.com (March 4, 2016)။ April 13, 2016 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Delta Air Lines Hub Station Los Angeles။ delta.com (March 4, 2016)။ April 13, 2016 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Delta Air Lines Hub Station Minneapolis။ delta.com (March 4, 2016)။ April 13, 2016 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Delta Air Lines Hub Station Tokyo။ delta.com (March 4, 2016)။ April 13, 2016 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Delta Air Lines Hub Station Salt Lake City။ delta.com (March 4, 2016)။ April 13, 2016 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Delta Air Lines Hub Station Seattle။ delta.com (March 4, 2016)။ April 13, 2016 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Delta to renovate RDU Sky Club, add premium bar (March 2, 2016)။ March 31, 2016 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၁၆.၀ ၁၆.၁ ကိုးကား အမှား - Invalid <ref> tag; no text was provided for refs named statsfacts
↑ 2010 Form 10-K, Delta Air Lines, Inc.။ United States Securities and Exchange Commission။ July 1, 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Delta Renames Business Jet Subsidiary 'Delta Private Jets'။ deltaprivatejets.com။ Delta Private Jets, Inc (September 9, 2010)။ 20 January 2011 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ January 20, 2010 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ “Delta Private Jets, formerly Delta AirElite Business Jets, isawholly owned subsidiary of Delta Air Lines...”
↑ Aircraft Fleet။ delta.com။ Delta Air Lines, Inc (27 February 2016)။
↑ Corporate Stats and Facts Delta Hub News။2October 2016 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Delta Air Lines, Inc. company။ May 7, 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Bio: Ed Bastian, Chief Executive Officer။ Delta။3May 2016 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Delta announces executive succession။
↑ Delta Air Lines, Inc. - Financial Information - Earnings Releases။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ဒယ်လ်တာ_လေကြောင်းလိုင်း&oldid=539890" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၁၉ စက်တင်ဘာ ၂၀၂၀၊ ၂၁:၀၄ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။